MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardBusiness Pagemm Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: Business Pagemm
B2B SIM MM
“B2B mobile package”များကို လုပ်ငန်းသုံးဆင်းကဒ်(B2BSIM)များနှင့်အတူတွဲဖက်၀ယ်ယူသုံးစွဲခြင်းဖြင့်သင့်လုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ပါပြီ။ အစိုးရဌာနများ၊အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ကုမ္ပဏီများ၊အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားသောစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင်လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက်အသုံးပြုရန်ဆင်းကဒ်များလိုအပ်ပါကမိမိတို့လုပ်ငန်းအမည်ဖြင့် “လုပ်ငန်းသုံးဆင်းကဒ်(B2BSIM)များကို” B2B mobile package များနှင့် အတူတွဲဖက်၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်!
Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » Data Carry Plus>>>“ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”
Data Carry Plus Pack ဆိုတာဘာလဲ?
Data Carry Plus Package ဆိုတာကတော့ မည်သည့်ပက်ကေချ့်ကိုမဆို ရက် (၃၀) သက်တမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 1000GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများလည်း ကံထူး ရယူနိုင်မယ့် ပက်ကေချ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတိုင်းမှာ ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့် လည်းရှိပါတယ်။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးနိုင်မည့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဒေတာလက်ကျန်နှင့်သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ရရှိမည့် Data Carry Plus အစီအစဉ်မှ မူလဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်၏ ဒေတာများ လျော့နည်းလာချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးနိုင်သောအစီအစဥ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့်Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်အသစ်များကို ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သတ်မှတ်ထားသော Data Carry Plus packages များကို အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးရန် အဆိုပြုဝယ်ယူထားပါက ဒေတာလက်ကျန်ပမာဏ 50 MB အောက်လျော့နည်းသောအချိန်တွင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကဲ့သို့ ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်နှင့် 1000 GB အထိ lucky data များ ကံထူးနိုင်မည့်အပြင် ဒေတာလက်ကျန်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါ ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့် Data Carry Plus Packages များအတွက်သာ ရယူနိုင်ပါသည်။
470MB 1000GB အထိ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး!
၃၀ ရက် [သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက် အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်]
*777*3*3# *777*3*4# Common USSD *777#
ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်ကို ပထမအကြိမ်ဝယ်ယူခြင်း နှင့်အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးသည့် အကြိမ်တိုင်းတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၂၇၉ ကျပ် 615MB *777*4*3# *777*4*4#
၁၇၇၉ကျပ် 860 MB *777*5*3# *777*5*4#
၂၆၆၉ ကျပ် 1290MB *777*6*3# *777*6*4#
Auto Renewal Data Carry Plus Package အတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ >>>>> အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
Auto Renewal Data Carry Plus Package အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ >>>>> အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
Lucky Data ဆိုတာဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၆၉၉ ကျပ်မှစပြီး ၂၆၉၉၉ ကျပ်အထိ မည်သည့် Data Carry ပတ်ကေ့ချ်များကိုမဆို ဝယ်ယူပါက အများဆုံး 1000GB အထိ ဒေတာများ ကံထူးရရှိနိုင်ပါသည်။
၆၉၉ကျပ် 250MB 1000GB အထိ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး! ၃၀ ရက်[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက် အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်]
၇၉၉ကျပ် 350MB *777*2#
၉၉၉ ကျပ် 470MB *777*3#
၁၂၉၉ ကျပ် 615MB *777*4#
၁၇၉၉ ကျပ် 860MB *777*5#
၂၆၉၉ ကျပ် 1290MB *777*6#
၄၄၉၉ ကျပ် 2160MB *777*7#
၈၉၉၉ ကျပ် 4330MB *777*8#
၁၇၉၉၉ ကျပ် 8660MB *777*9#
၂၆၉၉၉ ကျပ် 13030MB *777*0#
Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ရော ကြင်ကြင်နာနာပက်ကေ့ချ်ကိုပါ ဝယ်ယူထားပြီးသားဆိုရင်တော့ ဒီပက်ကေ့ချ်နှစ်ခုလုံးက ဒေတာပမာဏတွေကို MPT4U မှာရှိတဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ ပက်ကေ့ချ် Data Transfer Section မှတစ်ဆင့် မိမိချစ်ခင်ရသူတွေဆီ ဒေတာတွေမျှဝေပေးနိုင်ပါပြီ။
MPT4U Application မှတစ်ဆင့်လည်း အင်တာနက်ဖိုးအခမဲ့ဖြင့် လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပါသည်။
– Data Carry Pack ကိုလွယ်ကူစွာဝယ်နိုင်ခြင်း
၁။ မည်သည့် Data Carry Plus ပက်ကေချ့်ကိုမဆို ဝယ်ယူပါက 1000GB အထိ ဒေတာလက်ဆောင်များ ကံထူးရရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် ကံထူးထားသည့်ဒေတာပမာဏကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှု အားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၃။ Package ၏ သက်တမ်းပမာဏမှာ ၃၀ ရက်ဖြစ်ပြီး Package သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သောကာလမှာ ၇ ရက် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည့်အပြင် ပက်ကေချ့် သက်တမ်း ကိုနောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
၅။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာကို သက်တမ်း ၇ ရက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၇။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၈။ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သောကာလတွင် ကျန်ရှိနေသောပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၉။ ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ ရက်) အတွင်း Data Carry Plus Pack အသစ်ဝယ်ယူပါက အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာ ပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 22, 2020 မေ 1, 2022 Categories Business Pagemm, Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
Voice Pool mm
MPT ၏ Voice Pool ဝန်ဆောင်မှုသည် လူကြီးမင်း၏ ၀န်ထမ်းများ PSTN အပါအဝင် MPT ဖုန်းများသို့ သတ်မှတ်မိနစ်များအတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုနိုင်ရန် အုပ်စုဖွဲ့ထားပေးသော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
Business Premium/Eco mm
MPT ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြင့် လူကြီးမင်း၏ စီးပွားရေး လိုအပ်ချက်များကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုမျိုး အသုံးပြုချင်သော သုံးစွဲသူများအတွက် MPT ၏ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်မှာ အထူးသင့်တော်ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် သင်၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက် “Business Premium” နှင့် “Business Eco” ဝန်ဆောင်မှု နှစ်မျိုး ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
MPT ဖိုင်ဘာအင်တာနက်သည် နည်းပညာအသစ်၊ ခိုင်မာသော network တည်ဆောက်မှုဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက်ကို အစဉ်သဖြင့် အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အသစ်ထွက်ရှိလာသော ဝန်ဆောင်မှုနှစ်မျိုးလုံးသည် ထူးခြားသော စွမ်းဆောင်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
Toll Free Call service သည် စျေးကွက်စီးပွားရေး နှင့် ဝယ်သူဖောက်သည် တို့၏ ဆက်သွယ်တုံ့ပြန်မှု များအတွက် အဓိကကျသော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ Toll Free Call service ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်
– ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့် ၀ယ်သူဖောက်သည် တို့ကြား ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။
– ၎င်းတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုအပေါ် ၀ယ်သူဖောက်သည် တို့ဘက်မှ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ၀ ရရှိနိုင်သည်။
– ၎င်းတို့ဘက်မှ ၀ယ်သူဖောက်သည်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီဆက်သွယ်၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သည်။
– ၀ယ်သူဖောက်သည်များ၏မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းများပေါ်၌ မူတည်၍ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးစျေးကွက် ကို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်သည်။
– Toll Free Call နံပါတ်များကိုလည်း ကော်ပိုရေးရှင်း၏ထင်ရှားသော အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် MPT Data SIM ဖြင့် ထိရောက်သော ဒေတာ (အင်တာနက်) ဝန်ဆောင်မှုအား နေရာဒေသမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Data SIM အား သုံးစွဲသူ အသုံးပြုလိုသည့် နေရာ ဒေသတွင် တစ်ခု ထက်ပိုသော device သို့မဟုတ် device အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ဖြင့် လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
( ဥပမာ- wifi mobile hotspot, dongle, handy terminal)
MPT ၏ Data SIM ဝန်ဆောင်မှုသည် ဒေတာသီးသန့်အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
B2B ၏ CUG ဝန်ဆောင်မှုများသည် အုပ်စုတစ်ခုအတွင်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
CUG သည် အုပ်စုအတွင်း အကန့်သတ်မဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊အကန့် သတ်မဲ့ စာတိုပေးပို့မှုနှင့် MPT ၏ကွန်ယက်ဧရိယာအတွင်းအကန့် သတ်မရှိဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Minimum subscribers 5
B2B ၏ Data Plan သည် ပိုမိုများပြားသော ဒေတာပမာဏရရှိနိုင်မှု၊လွယ်ကူစွာမှတ်ပုံတင်နိုင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားနိုင်မှု၊နှစ်စဉ်ကြေးပေးရန်(မလို)ဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းထား နှင့်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။